China Specification for istili kunye Ukutyubhisha API Specification 5CT lesithoba UHLELO-2012 yoMvelisi kunye Supplier | Gold Sanon
API spec 5CT-2018 istili ne Ukutyubhisha
Grade Group: J55, K55, N80, L80, P110, etc
Ubude: R1, R2, R3
Isicelo: ogalelwe ioli ube mnye & istili Pipe
unyango Ubushushu: icima & Normalizing
Pipe Special: joint elifutshane
Ukusetyenziswa: ogalelwe ioli ube mnye neGesi
Kumbhobho Api5ct esisetyenziselwa kugrunjwa yemithombo oyile negesi kunye nokuthuthwa oyile negesi. Oil istili kakhulu kusetyenziswa ukuxhasa udonga manzi ngethuba nasemva kokuba kugqitywe kakuhle ukuqinisekisa ukusebenza eqhelekileyo wequla kunye nokuzaliswa kakuhle.
Grade uhlobo C MN Mo cr Ni cu P s Si
L80 1 - 0,43 a - 1,90 - - - - 0.25 0,35 0,030 0,030 0,45
L80 9Cr - 0,15 0.3 0.60 0 90 1.10 8.00 10.0 0,50 0.25 0,020 0,030 1.00
L80 13Cr 0,15 0.22 0.25 1.00 - - 12.0 14,0 0,50 0.25 0,020 0,030 1.00
C90 1 - 0,35 - 1.20 0.25 b 0.85 - 1,50 0,99 - 0,020 0,030 -
T95 1 - 0,35 - 1.20 0.25 b 0.85 0 40 1,50 0,99 - 0 020 0,010 -
C110 - - 0,35 - 1.20 0.25 1.00 0.40 1,50 0,99 - 0,020 0,005 -
QI25 1 - 0,35 1.35 - 0.85 - 1,50 0,99 - 0,020 0,010 -
Elements QAPHELA eboniswe kuthiwa kuhlalutyo kwimveliso
a Umxholo carbon for L80 ukuze kwandiswe ukuya kwi 0,50% iphezulu ukuba imveliso ioli-nakucinywa okanye Polymer-bungacinywa.
b Umxholo molybdenum zeBakala C90 Type 1 akukho lokunyamezela ubuncinane ukuba Ebubanzini bodonga lingaphantsi kwe 17,78 mm.
c Le contect carbon ye R95 ukuze kwandiswe ukuya kwi 0,55% iphezulu ukuba imveliso ioli-bungacinywa.
d Umxholo molybdenum for T95 Type 1 inokuncitshiswa ukuya 0,15% ubuncinane ukuba Ebubanzini bodonga lingaphantsi kwe 17,78 mm.
e For W. Grade P110, isiqulatho phosphorus uya kuba 0,020% ubuninzi kunye sulphur 0,010% esiphezulu.
Total zobude Under Layisha
Ukuqina a, c
Obucaciswe Wall Ubukhulu
Allowable Ukuqinisa ukwahlukana b
12,71 ukuya 19.04
19,05 ukuya 25,39
a ehlal'isenzeka lwembambano, ilabhoratri Rockwell C yokuqaqadeka uvavanyo iya kusetyenziswa indlela kasompempe.
b Akukho mida lukhuni zixeliweyo, kodwa ukwahluka eliphezulu kumiselwe njenge ulawulo lemveliso ngokungqinelana ne-7.8 no 7.9.
c Kuba-eludongeni uvavanyo yokuqaqadeka kumaBakala L80 (zonke iintlobo), C90, T95 kunye C110, iimfuno ezichazwe kwi HRC isikali kuba nani likhulu yobulukhuni abangenagama.
1. Kuba steel le mveliso, umenzi kufuneka enze uvavanyo eqine. Kuba elecrtrice welding, nelembande, depondeds kukhetho lomenzi wayo, uvavanyo eqine nga izakwenziwa kwipleyiti yesinyithi ekwakufudula umbhobho zenza okanye perfomred kwi umbhobho steel ngqo. Uvavanyo lwenziwa kwi kwimveliso nako zingasetyenziswa njenge uvavanyo imveliso.
2. Amathumbu zeemvavanyo ziya kukhethwa ngokungacwangciswanga. Xa kufuneka iimvavanyo ezininzi, indlela yeesampulu uya kuqinisekisa ukuba iisampula athathwe nga kumela ekuqaleni ekupheleni komjikelo unyango ubushushu (ukuba oko kuyasebenza apha) kwaye zombini iziphelo ityhubhu. Xa kufuneka iimvavanyo ezininzi, indlela uya kuhluthwa ngemibhobho ezahlukeneyo ngaphandle ukuba isampuli tube eqinileyo ukuze lincitshiswe zombini eziphelweni ityhubhu.
3. Isampulu umbhobho seamless ingasiwa kuyo nayiphi na indawo kwi achazwe apha yombhobho; umbhobho isampuli nge welding, kufuneka athathwe kwi malunga 90 ° ukuya umthungo weld, okanye ngokokukhetha umenzi. Iisampulu ziyathathwa malunga ikota zephetshana ububanzi.
4. Akukho nto phambi nasemva experiment, ukuba ukulungiselela isampula sifumaneke sinesiphene okanye kukho ukunqongophala kwezixhobo awungeni injongo olu lingelo, isampuli ukuze kulahlwe kwaye endaweni enye isampuli eyenziwe ithumbu efanayo.
5. Ukuba uvavanyo eqine emele inyanda iimveliso lingenako ukuhlangabezana neemfuno, umenzi unakho ukuthatha omnye iityhubhu-3 ukusuka nebhetshi efanayo ngemibhobho zokumakishwa uhlolo-.
Ukuba yonke retests zeesampulu bazanelisayo iimfuno, ibhetshi kweetyhubhu uyakufanelekela ngaphandle ityhubhu angakufanelekeli ukuba iisampulu ekuqaleni.
Ukuba ngaphezu kwesinye sampuli ekuqaleni iisampulu okanye iisampuli enye okanye ngaphezulu ukuba retesting musa ukuhlangabezana neemfuno ezithile, umenzi angahlola ibhetshi ngemibhobho nganye nganye.
Nebhetshi yaliwe iimveliso zinakho reheated kwaye reprocessed njenge yintlama entsha.
1. Le ndlovu uvavanyo iya kuba umsesane uvavanyo okanye ekupheleni cut esingekho ngaphantsi kwe 63.5mm (2-1 / 2Ke).
2. Imizekelo yezinto ukuze kunqunyulwa phambi unyango ubushushu, kodwa ngokuxhomekeke unyango ubushushu elinye nombhojana umelwe. Ukuba kusetyenziswa uvavanyo ibhetshi, namanyathelo aya kuthatyathwa ukuchonga ubudlelwane phakathi isampula ithumbu isampuli. iziko ngalinye ngo Ibhetshi nganye kufuneka kutyunyuzwa.
3. Le ndlovu iya atshabalalisa phakathi iipleyiti ezimbini ngaxeshanye. Xa iseti ngalinye flattening iisampulu zovavanyo, omnye weld ke atshabalalisa kwi-90 ° kunye nezinye atshabalalisa kwi 0 °. Le ndlovu iya atshabalalisa de iindonga ityhubhu zihlanganiswe. Phambi kokuba umgama phakathi amacwecwe parallel lingaphantsi kwe-ixabiso elikhankanyiweyo, akukho iintanda okanye ikhefu kufuneka avele nayiphi na inxalenye ipateni. Ngethuba yonke inkqubo flattening, kufuneka kubekho isakhiwo ihlwempu, welds na edidekile, delamination, overburning metal, okanye extrusion yesinyithi.
5. Ukuba ngaba nayiphi na isampuli emele ityhubhu lingenako ukuhlangabezana neemfuno ezithile, umenzi unakho ukuthatha isampulu ukususela ekupheleni enye ityhubhu uvavanyo zokuxabangela ade lahlangabezana neemfuno. Nangona kunjalo, ubude yombhobho ogqityiweyo emva isampulu kufuneka bungabi ngaphantsi kwe-80% ye ubude yokuqala. Ukuba nayiphi na isampuli ityhubhu emele inyanda iimveliso lingenako ukuhlangabezana neemfuno ezithile, umenzi unakho ukuthatha zohlobo ezimbini ezongezelelweyo ukusuka ibhetshi kweemveliso basike iisampuli kwakhona uvavanyo-. Ukuba iziphumo zezi retests zonke iimfuno, ibhetshi kweetyhubhu okufaneleyo ngaphandle ityhubhu ekuqaleni ekhethiweyo isampulu. Ukuba nayiphi na iisampulu retest lingenako ukuhlangabezana neemfuno ezithile, umenzi unakho isampula Iityhubhu eziseleyo lowo kwibhetshi nganye. Xa ukhetho yomvelisi, nayiphi ibhetshi kweetyhubhu singanyangwa retested njenge yintlama entsha kweetyhubhu kwakhona ubushushu.
1. Kuba ngemibhobho, iseti kwiisampuli uya kuhluthwa iqashiso ngamnye (ngaphandle kokuba kwiinkqubo abonise ukuba ukuhlangabezana neemfuneko zolawulo). Ukuba umyalelo busisigxina A10 (SR16), olu lingelo inyanzelekile.
2. Kuba istili, imibhobho intsimbi-3 kufuneka athathwe kwibhetshi nganye ekwenzeni imifuniselo. Kwimibhobho zeemvavanyo ziya kukhethwa ngokungacwangciswanga, yaye indlela yeesampulu uya kuqinisekisa ukuba iisampulu ezinikiweyo enakho ukumela ekuqaleni nasekupheleni komjikelo unyango ubushushu kunye ngaphambili umva iziphelo emkhonweni ngexesha unyango ubushushu.
3. Charpy V-inotshi uvavanyo lwefuthe
4. Akukho nto phambi nasemva experiment, ukuba ukulungiselela isampula sifumaneke sinesiphene okanye kukho ukunqongophala kwezixhobo awungeni injongo olu lingelo, isampuli ukuze kulahlwe kwaye endaweni enye isampuli eyenziwe ithumbu efanayo. Imizekelo yezinto akufunekanga ukuba nje kugwetywa kuba bengazifezekisi ezona ubuncinane wendele iimfuno zamandla alusebenzi nje.
5. Ukuba isiphumo sample ngaphezu kwesinye lingaphantsi ubuncinane wendele amandla imfuneko, okanye isiphumo sample mnye lingaphantsi kwe 2/3 we zikhankanyiweyo wendele imfuneko amandla, iisampulu amathathu uya kuhluthwa uphume kuyo, yaye retested. I-eneji Ifuthe yomzekelo ngalinye retested uya kuba mkhulu okanye Ndikulinganise zikhankanyiweyo wendele imfuneko amandla.
6. Ukuba iziphumo eksperimenti ethile musa ukuhlangabezana neemfuno kunye neemeko ukuze ukucikideka omtsha azenzeki, ngoko ezintathu iisampuli ezongezelelweyo zithathwa ngalinye nezinye iinyama ezintathu kwibhetshi. Ukuba yonke imiqathango eyongezelelweyo bazanelisayo iimfuno, ibhetshi abafanelekayo ngaphandle kwalowo ayiphumelelanga ekuqaleni. Ukuba piece ukuhlolwa ezongezelelweyo ngaphezu kwesinye lingenako ukuhlangabezana neemfuno, ngumvelisi ukhethe ukuba ahlole ke amaqhekeza aseleyo lowo ibhetshi ngabanye, okanye kufudumeze inyanda kwaye ahlole oko yintlama entsha.
7. Ukuba ngaphezu kwesinye izinto ezintathu yokuqala efunekayo ukuze angqine ibhetshi emfundo zingafunwa, kwakhona uhlolo-ekungavumelekileyo ukuba ukungqina ibhetshi kweetyhubhu uyakufanelekela. Ngumvelisi ukhethe ukuhlola iqhekeza iibhetshi eseleyo ngeenyama, okanye kufudumeze inyanda kwaye ahlole oko yintlama entsha .
1. umbhobho nganye iya phantsi kovavanyo loxinzelelo hydrostatic yonke umbhobho emva ukuqina (xa kufanelekile) kunye nonyango nobushushu lokugqibela (xa kufanelekile), yaye uya kufika uxinzelelo elikhankanyiweyo hydrostatic ngaphandle ukuvuza. Ixesha xi ebambe Esalingwayo lalibunjwa ngaphantsi 5. Kuba imibhobho nge welding, le welds ze imibhobho ziya ihlolwe ukuvuza phantsi koxinzelelo uvavanyo. Ngaphandle kokuba uvavanyo umbhobho lonke lwenziwa ubuncinane kwangaphambili kwi xi efunekayo ukuze imeko lokugqibela umbhobho ekupheleni, le mveliso ngomsonto processing kufuneka enze uvavanyo hydrostatic (okanye amalungiselelo loo uvavanyo a) ngomhla yonke umbhobho.
2. Imibhobho ukuba ubushushu baphathwe oyakuphathwa gadalala uvavanyo hydrostatic emva kokuba unyango ubushushu lokugqibela. Uvavanyo yengcinezelo yonke imibhobho kunye iziphelo yangaphakathi iya kuba ubuncinane uxinzelelo uvavanyo imisonto kunye yemiqadi yokuhlanganisa.
3 Ngemva zokuhlaziya ubungakanani yombhobho ekupheleni flat-igqityiwe yaye naziphi na amalungu ezimfutshane ubushushu kakubi, uvavanyo hydrostatic ziya kwenziwa emva kokuphela caba okanye intambo.
Kuba anquma zokutyubhisha joint ezimanyene kunye ubukhulu encinci kune okanye Ndikulinganise 5-1 / 2, ezi nokumelana ilandelayo isebenza sangqa kumphandle umzimba umbhobho kumgama omalunga nama-127mm (5.0in) ecaleni inxalenye eqinileyo; Le nokumelana ilandelayo isebenza sangqa kumphandle ityhubhu kumgama malunga Ndikulinganise netoti ityhubhu lukufutshane kwinxalenye eqinileyo.
Kuba zokutyubhisha lwangaphandle eqinileyo kunye nobungakanani 2-3 / 8 kwaye ezinkulu, le nokumelana ilandelayo isebenza sangqa kumphandle umbhobho ukuba anquma yaye ububanzi iyatshintsha ukususela ekupheleni kombhobho
Ocele udonga ububanzi nokunyamezelana umbhobho yi -12,5%
Le theyibhile ilandelayo ke iimfuno ezisemgangathweni ubunzima nokunyamezelana. Xa ubuncinane udonga ububanzi elikhankanyiweyo inkulu kune okanye ilingana ne 90% kodonga ububanzi elikhankanyiweyo, nelona qondo liphezulu ubunzima nokunyamezela ingcambu ngalunye kufuneka kwandiswe ukuze + 10%
Piece single + 6.5 ~ -3,5
Vehicle Layisha Weigh≥18144kg (40000lb) -1,75%
Vehicle Umthwalo Cinga <18144kg (40000lb) -3,5%
Order Ubungakanani <18144kg (40000lb) -3,5%
Previous: Nokujika ingxubevange Steel Boiler Imibhobho Superheater ingxubevange imibhobho Heat umzimba kwimibhobho
Okulandelayo: kwibhoyila carbon kwisinyithi Medium and Superheat tyhubhu standard ASTM A210
pipe steel API 5CT
N80 istili ogalelwe ioli ube mnye ityhubhu